रोनाल्डोको भूमिकामा लुका मोड्रिक कि ग्यारेथ बेल ?
मुख्य पृष्ठखेलकुदरोनाल्डोको भूमिकामा लुका मोड्रिक कि ग्यारेथ बेल ?
साउन ८, मोरङ, क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अप्रत्यासित रूपमा क्लब छोडेपछि अहिले रियल मड्रिडमा मुख्य भूमिका कसले लिने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । ९ वर्षे यात्रालाई बिट लगाउँदै उनी गएपछि उनको भूमिका लिनसक्ने दुई स्टारलाई देखिएको छ ।
यद्यपी रियल मड्रिडले रोनाल्डो युभेन्टस हानिएपछि उनको भूमिकामा अझै ठूला स्टारहरुमाथि आँखा गाढेको छ । पीएसजीका नेयमार, पीएसजी कै किलियन एम्बाप्पे र चेल्सीका इडेन हाजार्डमाथि रियलले नजर लगाएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
यी तीन स्टारमध्ये पीएसजीका नेयमार र एम्बाप्पे क्लबमै रहने भनेर प्रतिक्रिया दिएपछि इडेन हाजार्ड नै उसको अन्तिम नजर भएको छ । यता रियल भित्रै रहेका दुई स्टारले पनि रोनाल्डोको भूमिका निभाउन सक्ने देखिएको छ ।
रियलमा रोनाल्डो छँदै जमेका ग्यारेथ बेल र भर्खरै विश्वकपबाट चम्किएका क्रोएसियाली खेलाडी लुका मोड्रिक । यी दुईले रोनाल्डोको स्थान जमाउन सक्ने अपेच्छा गरिएको छ ।
क्रोएसियालाई विश्वकपको उपविजेता बनाएका मोड्रिकले आफ्नो १० नम्बरको जर्सी सर्वाधिक बेचेर पनि रोनाल्डोको स्थान लिन सक्ने बताइएको हो । रियलको जर्सी विक्रीमा रोनाल्डोलाई पछि पार्दै उनले रोनाल्डोको स्थान लिएका थिए ।
केही साताअघि मात्र रियल मड्रिडका टप स्कोरर रोनाल्डो युभेन्टस गएपछि मोड्रिक रियलमा जम्दैछन् । उनी रियलमा रहँदा उनको जर्सी नम्बर ७ अत्यधिक विक्री भएको जर्सी थियो । तर, उनी युभेन्टस गएपछि उनको स्थानमा मोड्रिक आएको स्पेनिश पब्लिकेसन एएसले जनाएको छ ।
स्पेनिश पब्लिकेसन एएसका अनुसार मोड्रिकले मड्रिडको सबैभन्दा ठूलो शर्ट बिक्रेताको रुपमा रहेका रोनाल्डोलाई पराजित गरेका छन् ।
आधिकारिक तथ्याङ्क अझैसम्म जारी नगरिए तापनि एएसका अनुसार, क्लब पसलमा हाल सबैभन्दा विक्री गरिएको जर्सी १० नम्बर अर्थात् मोड्रिककै रहेको छ । हाल क्लब पलमा सबैभन्दा धेरै मोड्रिककै शर्टको माग बढिरहेको छ ।
यद्यपी यी दुईमा भने रियलले नयाँ सिजनमा वेल्स स्टार ग्यारेथ बेलको भूमिका टोलीमा निर्णायक हुने विश्वास गरेको छ । अघिल्ला प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको नेतृत्वमा कमै मात्रै मैदानमा मौका पाएका बेलले अहिले पनि क्लब छाड्न सक्ने चर्चा छ ।
तर, बेल र उनका प्रतिनिधिसँग रियलका नयाँ प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगुइले यस्तो आशय व्यक्त गरेपछि उनी रियलमै रहने सम्भावना बढेको बताइएको छ । म्यानचेस्टर युनाइटेडले भित्र्याउने चर्चामा रहेका बेला रोनाल्डोले क्लब छाडेसँगै बेललाई मुख्य भूमिका दिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
अब रोनाल्डो नहुँदा त्यसको फाइदा बेललाई पुग्ने र उनले आफूलाई नयाँ स्टारका रूपमा स्थापित गराउने अवसर रहेको छ ।